A-LEVEL ― ugo hwamadzinza avashona | Kwayedza
A-LEVEL ― ugo hwamadzinza avashona
09 Aug, 2019 - 00:08	 2019-08-08T15:48:48+00:00 2019-08-09T00:00:04+00:00 0 Views
UCHISHANDISA nhetembo shanu kubva munhetembo dzokurova bembera nedzejikinyira kana mavingu, tsanangura zvaishungurudza VaShona mumagariro avo. 
Kuroyerwa kurima – mudetembo Kurova bembera sepanonzi, “Ndava kufira kurima” nepanonzi, “Maoko aya kubata uku ndiko kwandava kufira,” uye panonzi,” Zvino kana zviri zvokurima rimaiwo.”
Ngozi – mudetembo rinonzi, Wofa nechaunoziva panonzi, “Chiona nhasi dzimba dzose misuo yapfigwa” nepanonzi, “Gona rawakachera rokupedzera mhuri igona risina chipundutso,” uye panonzi, “Mushonga wengozi kuripa.”
Makona anokuvadzisa – mudetembo, Kurumwa nechokuchera panonzi, “Chivi chinodya mwene wacho” nepanonzi, “Gona rawakachera nhasi rorwisewe,” uye panonzi, “Nhasi uzivi hwako hwakupandukira.”
Barika rinoparadza nokuunza vavengi – mudetembo, VaNyachide naVaRusemwa panonzi,
“Mumba munopindwa maVaNyachide,
MaVaRusemwa munomirwa negonhi,” nepamwe panonzi,
“Ndoita sechirikadzi isina murume,
Iwe murume wangu uripo.”
Pamwe panonzi, “Chandakatadza chii pano pauri,
Chokupa kundisema serengenyn’a?”
Upombwe hwemurume – mudetembo, Unopiwei chandisina? sepanonzi,
Nokwaunofumobva mukanganyama haundiudzi,” nepamwe panonzi,
“Chaunotsvaga mumamana chausina mumba chii,
Chinokunda muzipiro wechanguwo chandinobika?” Uye panonzi, “Igapui raunodya uchikwana kupinda nomusoro wese?”
Tinopedzisa mhinduro yemubvunzo uno svondo rinouya.
‘Tinoda kuti STEM isimudzire nyika’15 Nov, 2019
ZIVA15 Nov, 2019
Kuchengetedza vanhu mungano15 Nov, 2019